Uchwepheshe Wezikhumba Nezinwele
Iphayona Lokuhlangana Kweshawa
I-Luxury Matte black finishes, izihlungi eziphindwe kabili ezenziwe ngezifiso
I-Xinpaez: Uchwepheshe ekwelashweni kwamanzi kusukela ngo-2010 China Xinpaez imishini yokuhlanza amanzi Co., Ltd.ngumkhiqizi ovelele ocwaningweni, ekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwamakhanda eshawa, amapayipi eshawa, izihlungi zamanzi, izingxenye zokuhlunga amanzi nezesekeli zekhishi. Yasungulwa ngonyaka we-2010 ngenhlokodolobha ebhalisiwe ye-6 million yuan (RMB). Ngaphansi kokuholwa okubalulekile nguMqondisi wethu, 'Mnu. WenLian Qiao ', sizuze impumelelo enkulu kulesi sizinda.
Isici sesihlungi sokuhlanza amanzi esifakwe ekhaya siguqulwa kaningi. Ngingayigeza futhi ngiqhubeke nokuyisebenzisa? Lokhu akukuhle! ukuphepha kokusetshenziswa kwamanzi ngokujwayelekile, Sikholwa ukuthi imindeni eminingi ifake izinto zokuhlanza amanzi. Amanzi ompompi ayageleza ...
Manje izimo zokuphila zabantu ziya ngokuba ngcono futhi ziba ngcono, futhi sebeqalile ukulandela ikhwalithi yempilo. Akunandaba ukuthi uyadla, uyaphuza noma uyayisebenzisa empilweni, udinga impilo, futhi uma kunesidingo, uzosebenzisa imishini ethile ukusiza, ukuze ...
Kokuhlanza amanzi amaningi emndenini, into yokuhlunga esiteji sokuqala iyinto yesihlungi se-PP ukotini. Isici sokuqala sesihlungi asithinti kuphela ikhwalithi yamanzi, kepha sithinta nomphumela wokuhlunga wesigaba esithathu noma wesigaba sesine nempilo yomlilo ...